မွကှေကျဝယျမယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ သခြောစဈဆေးပါ – Daily Feed MM
Admin_John | October 14, 2021 | Knowledge | No Comments
အိုခေ…အခွားနညျးသုံးစှဲခှငျ့ လန- ၃၀
၄။ အိမျယာဆောကျလုပျခှငျ့ အတှကျလားဆိုတဲ့…အကွောငျးအရာတှရှေိပါတယျ….
ပုံစံ ၁၀၅. ၁၀၆ ရှိရုံနဲ့မွယောပိုငျဆိုငျကွောငျးအထောကျအထားမဟုတျပါဘူး.. မွနေယျနမိတျသကျမှတျခကျြနဲ့မွရောဇဝငျသာဖွဈပါတယျ…..
နောကျဆုံးပွောခငျြတာကတော့…ကိုယျခြှေးနဲစာနဲ့ဝယျယူမဲ့ မိတျဆှမြေားသညျ..ကိုယျဝယျယူမဲ့မွအေကွောငျးသိရှိနားလညျမှသာဝယျယူရနျအကွံပေးခငျြပါသညျ ။
(လယ၃၀ ခှငျ့ပွုခကျြပုံစံကိုပါ ပူးတှဲဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ )
@အိမျခွံမွအေကွောငျး လုပျကိုငျနသေူမြား သိကိုသိထားသငျ့တဲ့ မွအေမြိုးအစားတှကေို ဖျေါပွပေးပါမညျ။
အိမျခွံမွနေယျပယျနဲ့ တိုကျရိုကျဆကျစပျတဲ့ မွအေမြိုးအစားတှမှော-
#မွပေိုငျမွေ ။ ။ မွပေိုငျမွဆေိုတာဟာ မွို့တျောရဲ့ နယျနိမိတျအတှငျးမှာ စနဈတကြ မွို့ကှကျ‌ဖျောထုတျကာ ရောငျးခခြဲ့စဥျက ပိုငျဆိုငျထားပွီး မွပေိုငျရှငျအခှငျ့အရေးအပွညျ့ရှိတဲ့ မွအေမြိုးအစားကို ဆိုလိုပါတယျ။
#ဘိုးဘှားပိုငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာနိုငျငံ ကြေးရှာမြားအကျဥပဒေ ပုဒျမ ၄၊ ပုဒျမခှဲ (၁၀) အရ ဘိုးဘှားမိဘမြားလကျထကျက “ဓမ်မဦးခြ” ပိုငျဆိုငျလာခဲ့ပွီး လှဲပွောငျးဆကျခံခှငျ့ရှိကာ “မစိုကျပြိုးသညျ့မွေ” အမြိုးအစားကို ဘိုးဘှားပိုငျမွလေို့ သတျမှတျပါတယျ။
#ဂရနျရှိမွပေိုငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာနိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေား ဥပဒပေုဒျမ ၇(က) အရခှငျ့ပွုထားသညျ့ ဘိုးဘပိုငျမွကေဲ့သို့ အခှငျ့အရေး အဆငျ့အတနျးရှိတဲ့ ‌မွကေို ဂရနျရှိမွပေိုငျမွလေို့ချေါပါသညျ။
#လိုငျစငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာနိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေား အပိုဒျ – ၃၀၊ ၃၄ တို့အရ၊ ကျောမတီကသတျမှတျသညျ့ စညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့အညီ ယာယီအသုံးပွုခှငျ့ပေးထားသော မွကေို လိုငျစငျမွလေို့ချေါပါသညျ။
#ပါမဈမွေ ။ ။ ကျောမတီကသတျမှတျထားတဲ့ စညျးကမျးခကျြတှနေဲ့အညီ “လူနအေိမျ” သိုမဟုတျ “အဆောကျအအုံဆောကျလုပျနထေိုငျ ခှငျ့” ပွုထားသော မွကေို ပါမဈမွလေို့ ဆိုလိုပါသညျ။
#မွငှေားဂရနျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာနိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေား ဥပဒေ ၇/၈ နှငျ့ နညျးဥပဒေ အပိုဒျ ၂၉ တို့အရ ကျောမတီကစညျးကမျးခကျြမြား သတျမှတျပွီး နှဈကာလ အပိုငျးအခွား သတျမှတျ၍ မွငှေားစာခြုပျဖွငျ့ အငှားခထြားတဲ့မွကေို မွငှေားဂရနျမွေ လို့ချေါ
#စကှာတာမွေ ။ ။ “စကှာတာမွေ” ဆိုတာ မွငှေားစာခြုပျမရယူခဲ့၍လညျးကောငျး၊ မွငှေားစာခြုပျ သကျတမျးကုနျဆုံးပွီးနောကျ အသဈလဲလှယျခွငျးမပွု၍လညျးကောငျး မွငှေားစာခြုပျပါ စညျးကမျးခကျြ တဈရပျရပျဖောကျဖကျြ၍လညျးကောငျး “မွအေဆငျ့အတနျး နိမျ့ခြ
သတျမှတျထားတဲ့ မွကေို” ဆိုလိုပါသညျ။
#ကြူးလှနျခွငျးမွေ ။ ။ လူနရေပျကှကျအတှငျး စနဈတကရြှိသော အိမျရာမွကှေကျထဲမှာ ကြူးလှနျခွငျး “ပွစောဖွငျ့ကောကျခံတဲ့မွေ” မြိုးကို ကြူးလှနျခွငျးမွလေို့ ချေါပါသညျ။
#ကြူးကြျောမွေ ။ ။ ကျောမတီပိုငျမွနှေငျ့ ကျောမတီက စီမံခနျ့ခှဲပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ မွပေျေါမှာ ခှငျ့ပွုခကျြ တဈစုံတဈရာ မရှိသူမြား ဝငျရောကျနထေိုငျလြှကျရှိတဲ့ မွကေို ကြူးကြျောမွလေို့ချေါပါသညျ။
အိုခေ…အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် လန- ၃၀
၄။ အိမ်ယာဆောက်လုပ်ခွင့် အတွက်လားဆိုတဲ့…အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်….
ပုံစံ ၁၀၅. ၁၀၆ ရှိရုံနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားမဟုတ်ပါဘူး.. မြေနယ်နမိတ်သက်မှတ်ချက်နဲ့မြေရာဇဝင်သာဖြစ်ပါတယ်…..
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့…ကိုယ်ချွေးနဲစာနဲ့ဝယ်ယူမဲ့ မိတ်ဆွေများသည်..ကိုယ်ဝယ်ယူမဲ့မြေအကြောင်းသိရှိနားလည်မှသာဝယ်ယူရန်အကြံပေးချင်ပါသည် ။
(လယ၃၀ ခွင့်ပြုချက်ပုံစံကိုပါ ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ )
@အိမ်ခြံမြေအကြောင်း လုပ်ကိုင်နေသူများ သိကိုသိထားသင့်တဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
အိမ်ခြံမြေနယ်ပယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်တဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေမှာ-
#မြေပိုင်မြေ ။ ။ မြေပိုင်မြေဆိုတာဟာ မြို့တော်ရဲ့ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ စနစ်တကျ မြို့ကွက်‌ဖော်ထုတ်ကာ ရောင်းချခဲ့စဉ်က ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြေပိုင်ရှင်အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတဲ့ မြေအမျိုးအစားကို ဆိုလိုပါတယ်။
#ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (၁၀) အရ ဘိုးဘွားမိဘများလက်ထက်က “ဓမ္မဦးချ” ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီး လွှဲပြောင်းဆက်ခံခွင့်ရှိကာ “မစိုက်ပျိုးသည့်မြေ” အမျိုးအစားကို ဘိုးဘွားပိုင်မြေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
#ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ ဥပဒေပုဒ်မ ၇(က) အရခွင့်ပြုထားသည့် ဘိုးဘပိုင်မြေကဲ့သို့ အခွင့်အရေး အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ‌မြေကို ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေလို့ခေါ်ပါသည်။
#လိုင်စင်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ အပိုဒ် – ၃၀၊ ၃၄ တို့အရ၊ ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ယာယီအသုံးပြုခွင့်ပေးထားသော မြေကို လိုင်စင်မြေလို့ခေါ်ပါသည်။
#ပါမစ်မြေ ။ ။ ကော်မတီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီ “လူနေအိမ်” သိုမဟုတ် “အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်နေထိုင် ခွင့်” ပြုထားသော မြေကို ပါမစ်မြေလို့ ဆိုလိုပါသည်။
#မြေငှားဂရန်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ ဥပဒေ ၇/၈ နှင့် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၂၉ တို့အရ ကော်မတီကစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီး နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြား သတ်မှတ်၍ မြေငှားစာချုပ်ဖြင့် အငှားချထားတဲ့မြေကို မြေငှားဂရန်မြေ လို့ခေါ်
#စကွာတာမြေ ။ ။ “စကွာတာမြေ” ဆိုတာ မြေငှားစာချုပ်မရယူခဲ့၍လည်းကောင်း၊ မြေငှားစာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြု၍လည်းကောင်း မြေငှားစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ဖောက်ဖျက်၍လည်းကောင်း “မြေအဆင့်အတန်း နိမ့်ချ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေကို” ဆိုလိုပါသည်။
#ကျူးလွန်ခြင်းမြေ ။ ။ လူနေရပ်ကွက်အတွင်း စနစ်တကျရှိသော အိမ်ရာမြေကွက်ထဲမှာ ကျူးလွန်ခြင်း “ပြေစာဖြင့်ကောက်ခံတဲ့မြေ” မျိုးကို ကျူးလွန်ခြင်းမြေလို့ ခေါ်ပါသည်။
#ကျူးကျော်မြေ ။ ။ ကော်မတီပိုင်မြေနှင့် ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ မြေပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသူများ ဝင်ရောက်နေထိုင်လျှက်ရှိတဲ့ မြေကို ကျူးကျော်မြေလို့ခေါ်ပါသည်။